[Fikrad] Kaabayaasha iyo Adeegyada Xaqiijinta - Shabakadaha SME | Laga soo bilaabo Linux
phico | | Laga soo bilaabo Linux, GNU / Linux, Lagu taliyay, Shabakado / Adeeg
In badan oo ka mid ah labaatanka maqaal ee qormooyinka ah ee la daabacay illaa maanta ee taxanaha Shabakadaha SME, ayaa loo uuraystay si loo gaaro heerkaan iyadoo si cad loo fahmayo muhiimadda muhiimka ah ee adeegyada DNS iyo adeegyada DHCP - iyada oo aan la iloobin NTP - ee Shabakad Ganacsi.
Sida aan ku sharaxnay maqaaladii hore, kuwani waa adeegyo muhiim ah - gaar ahaan DNS - shabakad kasta. Waa run in aanaan taaban barnaamijyada qaar sida NSD ama server magac magac leh oo si ballaaran loogu adeegsado serverka 'Root DNS server' iyo inay u adeegi karto marka loo eego Aagagga loo xilsaaray masuuliyadeena.
Haddii aynaan dadaal iyo waqti weynba u huray mawduucyadii hore, hadda waa inaan ku sharxnaa mid kasta oo iyaga ka mid ah hab qasab ah. Taasi waa sababta muhiim ah Kuwa ku cusub Shabakadaha SME, aqri oo baro daraasadaha asalka ah. Akhris la'aan, waxaad yeelan doontaa dulduleelo badan iyo su'aalo aanan ka jawaabi doonin mustaqbalka. 😉
Dalkayga -Cuba- waa wax iska caadi ah in, marka Maamulaha Shabakad ama Saynisyahan Kumbuyuutar ah oo la siiyay mas'uuliyadda ah in la geeyo shabakad cusub SME kasta, iyada oo aan laga fekerin laba jeer waxay rakibaysaa adeegyada Kaabayaasha iyo Hubinta iyadoo lagu saleynayo Microsoft® Active Directory®. Kuma khusayso in SME ay leedahay 15 ama 1500 oo koox. Waxay ku rakibaan Microsoft Active Directory 2008, 2012, ama "nooca ugu dambeeya" iyagoon xitaa ka fikirin.
Ma lihid caqliga guud - midka ugu yar ee dareenka - inaad sahamiso ama aad ogaato waxyaabo kale oo beddeli kara.
Kama buun buuninayo markaan cadeeyo waxa kor ku xusan, inkasta oo muddooyinkii dambe iyo cadaadis maamul, ay dalbanayaan in la rakibo Zentyal®, taas oo ah barnaamij gaar loo leeyahay oo bixiya Nuqul Bulsho oo mararka qaar ka taga waxyaabo badan oo la doonayo. Waan hubaa in noocyada la bixiyay ay aad uga sareeyaan, boggan loogu tala galay Software-ka Bilaashka ah waa inaan ahaano sida ugu macquulsan uguna macquulsan oo aan ku muujino aragtideena ku saleysan dhaqanka oo aan u aragno inuu yahay heerka ugu fiican ee runta.
Waan ogahay kiisaska qayb ama gabi ahaanba guuldaradii markay ka soo hayaameen Microsoft una guureen Zentyal. Waana inaad qaadatid boodadaas waa inaad si fiican u diyaar garowdaa oo aad aqoon u leedahay Software-ka Bilaashka ah. Aad baan u qadariyaa fikradaha saaxiibkay iyo saaxiibkay ka fogaansho yaa faallo geesinimo leh kaga tagay Zentyal maqaalka BIND iyo Tusaha Firfircoon® - Shabakadaha SME, oo aad akhrin karto.
Waxaan qoray dhowr maqaal oo ku saabsan ClearOS 5.2 Adeegga Xidhmada 1, xal aad u fiican oo waqtigeedii ku guuleystay abaalmarino badan oo loogu talagalay Software-ka Bilaashka ah ee Bilaashka ah, oo aan raacay illaa aan ka akhriyey maqaalka ClearOS 6.3 waa Godawful, Sii wad Isticmaalka 5.x. Siyaasad xumo Xudunta Clear, shirkad yar oo u heellan sameynta ClearOS - iyo sidoo kale barnaamijyo kale- in la xiro labada nooc Community ee alaabtooda. Si kastaba ha noqotee, ma aanan joojin inaan fiiriyo ClearOS illaa noockeeda 7.2. Xaqiiqdii, waxaan soo saarayay ClearOS 5.2 in kabadan 4 sano, oo leh macaamiisha Windows noocyadooda oo dhan iyo in kabadan 60 kombiyuutar.
Shirkad gaar loo leeyahay waxa ugu weyni waa faa'iido. Caqli gal ah! Waxa dhacaya ayaa ah in, mararka qaarkood, aysan si buuxda u xaqiijin baaxadda ballaadhan ee go'aannada ku saleysansida ku jirta halbeeggaas keliya. Hadaad damacsantahay inaad goosato, beero. Ka eeg Red Hat tusaale ahaan waxa la sameeyo.Dhacdadan, ClearOS waxay ku saleysan tahay nidaamka hawlgalka CentOS / Red Hat
, laakiin sida muuqata kuma jirto tusaalaha Shirkadda Koofiyadaha Cas sida oo kale. Wuu tagaa oo Red Hat ayaa iibsata maalin maalmaha ka mid ah haddii ay tahay xiisaha uu u qabo la macaamilka Microsoft, su'aashaas oo aan u muuqan -in xilligan-sababo la xiriira xiisaha uu u qabo inuu ka helo Server-kiisa 389 ee lala xiriirin karo Microsoft Active Directory ee habka bidirectional.
Waxaa laga yaabaa in ilaa iyo hadda aan soo sheegay saddex ka mid ah afarta barnaamij - ee aan ku dhiirranahay in aan iraahdo waa kuwa ugu badan ee loo adeegsado kaabayaasha iyo adeegga xaqiijinta ee Shabakado badan oo SME ah:
Microsoft Directory Tusaha
ClearOS - Samba ku saleysan PDC
Zentyal - Diiwaanka Firfircoon ee ku saleysan Samba
Oo haddaan si dhow u eegno, DHAMMAAN waxay ku jihaysan yihiin Microsoft Networks! Heerka ah Xaqiiqda -taas oo aan macnaheedu ahayn inay ugu fiican tahay mudnaanteeda- waa Shabakadda Microsoft. Haddii aan jeclaanno iyo haddii kaleba, ama aan la dagaallano iyo haddii kaleba, waa xaqiiqo aynaan karneyn oo aynaan iska indho-tiri karin.
Kuwa masuulka ka ah hirgalinta iyo u adeegida Shabakadaha SME awood uma lihi inay iska indhatiraan xaqiiqadan.
Waxaan u maleynayaa in xilligan qofna uusan qarsoodi ahayn oo ku saabsan Gigantic La'aanta Asturnaanta ee ay soo gaareen nidaamyada hawlgalka Microsoft, oo si fudud loo xaqiijin karo iyadoo la aqrinayo weydiimaha DNS ee ay sameeyeen nidaamyadooda hawlgalka -waxaa lagu sharaxay maqaaladii hore ee ku saabsanaa mawduuca DNS iyo DHCP - markaan dhisno weydiimaha ayaa qoran.
Waxa ay u muuqataa in inta badan dadka isticmaala dhamaadka isticmaalaya qaar ka mid ah nidaamka hawlgalka Microsoft aysan wali arkin movies Mareykanka «Shuruudaha iyo Xaaladaha Laga Yaabaa Inay Codsadaan -2013"; "Snowden-2016»Laga soo bilaabo agaasimihii fiicnaa Oliver Stone; IWM, iyo waliba aqrinta qoraalo badan oo ku saabsan mowduuca lagu daabacay internetka.
Gacaliye iyo Gacaliye, kani waa degel loogu talagalay Barnaamijka Bilaashka ah. Wax kale maahan. Haddayna lahayn xusuus aad u xun, waxay xusuusan doonaan markii Microsoft ay ugu yeertay Stallman a ... Si kastaba ha noqotee, hadda Microsoft Waxay Jeceshahay Linux. Even Xitaa wuxuu sii daayay a nooca Microsft SQL Server-kaaga oo lagu rakibi karo Red Hat. Waa uun hal tusaale oo ka mid ah khalkhal galinta maskaxeed ee suurto galka ah ee shirkadaha runta ah ee awooda badani ay noo hoos geyn karaan iyagoo ku saleynaya danahooda dhaqaale. Maanta waan ku necbahay berritana waan ku jeclahay. Dhammaan waxay kuxirantahay kasbashada lacagta.
In kasta oo qaar badani rumaysan karin, wadada Adeegyada Kaabayaasha Dhaqaalaha iyo Xaqiijinta waxay maraysaa dhammaan nuuxnuuxyadii iyo cranniesyadii hore, waxaana qabaa inay caafimaad tahay in xoogaa ruxruxo qalfoofka kuwa ay ka go'an tahay inay igu weheliyaan halxiraalahan. Haddii aad rabto inaad ogaato tusaale nool oo ah farsamooyinka shirkadda xoogga leh ee Microsoft Corporation, ku sii wad goobta Aad u Linux Maqaalka Eduardo Molina, FSFE: "Ereygii ugu dambeeyay weli laguma sheegin Munich", iyo dhammaan qoraalladii hore ee la xiriiray mowduuca, oo lagu daabacay bartaas oo tayo aad u wanaagsan leh.
Sida loo sheegay Morpheus a neo filimka lama huraanka ah «Matrix": Maskaxdaada fur!.
Wadada buuxda ee maqaalka: Laga soo bilaabo Linux » Laga soo bilaabo Linux » [Fikradda] Kaabayaasha iyo Adeegyada Xaqiijinta - Shabakadaha SME
Maqaal cad, muhiim ah, oo soo jiidasho leh. Waad ku mahadsan tahay mar kale waqtigaaga iyo dadaalkaaga aad noo hurtay.
Maqaalka sidoo kale waa mid aad u xiiso badan maxaa yeelay wuxuu sharraxayaa waayo-aragnimada sida sysadmins ay ugu wajahaan maamulka shabakadaha.
Aad ayey qiimo u leedahay in la ogaado ra'yiga aan haba yaraatee wax wanaagsan ku jirin ee laga muujiyey hirgelinta Zentyal sida PDC + AD.
Hello IWO! Waxaan caddaynayaa in ra'yiga la muujiyey uu ku saabsan yahay nooca Beesha Zentyal, ma bixinayo lacagteeda, tan iyo kii ugu dambeeyay ee aanan arag. Waan ogahay xiriirka aan kula leeyahay inaad tixgelineyso u guurista Software-ka Bilaashka ah. Waxaan kugula talinayaa adiga oo inyar naga sug si aan u galno sida loo hirgeliyo Tusaha Firfircoon - Domain Controler "AD-DC Samba 4.51".